Wonke umshayeli wemoto uzama ukuqinisekisa ukuphepha okukhulu uma ushayela. Abasizi abakhulu kakhulu endleleni - GPS-abahamba ngezimoto. Lezi amadivayisi zanamuhla ezihambisana nezimo eziningi. Ziziphi izindlela zokuhamba nemikhiqizo yanamuhla yimuphi umkhiqizo ozokhetha?
I-GPS-i-navigator namuhla iyinsiza ehlukahlukene yokusebenza yokubeka indawo, ngakho-ke izixhumanisi eziqondile kanye nomzila kuzonqunywa kumephu yendawo. Cishe zonke izinhlobo zanamuhla zinexwayiso ngezwi, ngakho-ke umshayeli akadingi ukuphazanyiswa ngenkathi ushayela. Ngaphezu kwalokho, abahamba nge-GPS bezimoto bangaba nokusebenza okucebile okwandisa amandla alawa masekeli. Okuyinhloko yomsebenzi wabo kanje:
Uhlelo lokuhamba kwe- GPS luhlanganisa ama-satellite satellites angu-24 ahamba ezinkambweni zomhlaba. Bathumela izimpawu zomsakazo emhlabeni wethu, ezithathwa yizinsimbi ezisemhlabathini.
Ngemuva kokuthola isignali, umgibeli wemoto uyakwazi ukunquma izixhumanisi zokuhamba kwemoto kanye nomzila wayo.
Indlela yokukhetha i-navigator ukuze isetshenziswe ngokuthembekile futhi ngokuqinisekile?
Okokuqala: khetha ibalazwe
I-GPS yamanje-izithuthi zezimoto zisekelwe ezinhlelweni zokuhamba. Okuthandwa kakhulu yi-Navitel no-Garmin. Uhlelo lokuqala luyi-software eyenzelwe ama-PDAs, abaxhumanisi nabagibeli bemoto benani lemikhiqizo: Navitel, Prestigio, Explay, Lexand. Uhlelo lusebenza ngesisekelo samabalazwe eningiliziwe e-vector emadolobheni nasezindaweni zaseRussia, lapho konke kuboniswa khona - kusukela esiteshini sesitimela kuya kwinombolo yendlu, okusiza ukuqondisa kunoma yisiphi isifunda.
I-Garmin ihlomisa abahamba ngezinyawo abanokwethenjelwa, okungafani nekhwalithi yokwakha, okulula kwemenyu nokulula ukusetshenziswa. I-cartography yale nkampani ihlale ithuthukiswa, ngakho uzohlale uqaphela ukuthi ukuphi imininingwane enembile kunazo zonke.
Okwesibili: khetha umkhiqizo nokusebenza
Ama-GPS-abagibeli bezimoto ezifanelekayo bangaba ngumsizi onokwethenjelwa kunoma yisiphi isimo somgwaqo. Qaphela ukuthi imikhiqizo eveza imikhiqizo enjalo, inombolo enkulu. Omunye nomkhiqizo ofanayo unikeza abahamba ngezinkambo zamanani ahlukene - kusuka kubhajethi kuya ekugcineni. Eyokuqala - elula, le yamuva inemisebenzi ephelele. Phakathi kwamathuba athandwa kakhulu:
I-Bluetooth ne-Hands Free: ngokuvumelana namazinga akhona, izingxoxo kumadivayisi eselula ngenkathi ushayela zingavunyelwe. I-module ye-Bluetooth eyakhelwe ngaphakathi ingaxazulula le nkinga, ngoba ungakwazi ukuxhumana ngenkathi ushayela phezu kwezingcingo ngaphandle kokusebenzisa izandla zakho. Ngakho, lo mgwaqo uzoba ophephile futhi ukhululekile ngangokunokwenzeka.
Ukusekela imemori khadi. Uma ngabe idivaysi inememori khadi eyakhelwe ngaphakathi, ungabhala noma yiluphi ulwazi kudivayisi yakho nganoma yisiphi isikhathi.
Ukuzijabulisa. Ukusekela isidlali sevidiyo nomsindo - imisebenzi eyengeziwe ukuthi isiphequluli se-GPS sinakho. Inani lentengo enjalo, yebo, liphakeme, kodwa ukusebenza kungcono kakhulu.
Amamodeli we-Hybrid afana namakhasimende amaningi. Bahlanganisa ukusebenza kwezinsimbi ezimbili ngesikhathi esisodwa, ezisezindlu ezifanayo. Bathenge ngaphezulu kakhulu ngenani lentengo, ngaphezu kwalokho, ungagcina isikhala ku-cabin. Ngenxa yemithombo yesimanje yezobuchwepheshe, amadivaysi ama-hybrid abonakala ngokusebenza kahle. Phakathi kwamamodeli athandwa kakhulu ahlanganisa imisebenzi yomgibeli nombhalisi, ungabheka:
I-Prestigio GeoVision 5800BTHDDVR. Lona i-DVR yesimanje ne-GPS-ye-navigator, ekhombisa ukuklama kwangempela, ukulungiswa okuphelele komsebenzi nokwethulwa kobuchwepheshe obuphambili. Ukufinyelela ku-Intanethi kuyo kuqhutshwa nge-Bluetooth module, futhi inzuzo yekhamera ikhamera ye-DVR. Idivayisi isebenza kwiprosesa yombili-core, ifakwe isibonisi esibonakalayo se-LED, ifakwe amakhadi "we-Navitel", angasetshenziswa ngemuva kweminyaka emibili. Imodeli iphakanyiswe kwipaneli yensimbi noma i-windshield. Ukubonisa okubucayi kuhle ukubuka kuphela ukurekhoda kwerekhoda, kodwa futhi nama-movie. Umsebenzi we-DVR unikezwa ikhamera yangemuva. Intengo yalolu hlobo i-rubble engu-6500-7500.
I-Lexand STR-7100 HDR. Le DVR ephelele ne-GPS-navigator idonsela ukunakwa kwe-multifunctionality. Yonke idatha yomshayeli iboniswa kusikrini esingu-7 intshi. Isibonelo sibheka ukunakwa kwabathengi, kufaka phakathi ukubukeka okukhangayo. Idivayisi ifakwe amakhadi ajwayelekile we-Navitel nesofthiwe elayisensi. Ukuziqhenya komklamo kunombono omkhulu wokubuka, ngenxa yokuthi ukuqoshwa kwenziwa ngekhwalithi. Enye yokuhlanganisa - ikhono lokuxhuma amakhadi amabili ememori. Izindleko zemodeli yi-rubble engu-8500-9000.
Qaphela ukuthi idivayisi ngayinye, kungakhathaliseki ukuthi iyinani, inemininingwane eningiliziwe, echaza izici zendlela ethile, ukuthi ixhunywe kanjani kukhompyutha futhi ibuyekeza amakhadi, ichaza imisebenzi eyisisekelo yedivayisi nezici zayo zobuchwepheshe.
Ukuze usebenzise ngaphandle kwemoto ungathenga i-GPS-ye-navigator ephathekayo. Izici zalo - ngokwanda kwamandla nokumelana nokunyakaza. Ngamandla anganele amandla, lawo madivayisi angasebenza isikhathi eside ngokwanele. Abakhiqizi banamuhla banikeza amadivaysi aphansi angabizi futhi abizayo.
Ngakho, esigabeni samanani kuze kufike ku-5000 rubleki ungathenga i-BUSHNELL BackTrack Original. Kubiza ama-ruble angu-2800 kuphela futhi unokwethenjelwa futhi kulula ukusebenza. Kungasetshenziswa kufaka phakathi nekhampasi. Imodi yokunyakaza kuze kube iphuzu ikuvumela ukuba unqume ukuqondisa kanye nebanga endaweni ethile - imoto, indlu, egcinwe ememori yendlela. Imodeli iyinto elula ngangokunokwenzeka, ngakho-ke ingabizi.
Phakathi kwezithombe eziphambili kakhulu nezindleko - i-GPS ye-GPS-ye-navigator Garmin. It ingathengwa ngokwesilinganiso kusuka 6000 rubles nangaphezulu. Isibonelo, imodeli yeGarmin DAKOTA 20 (ukuthengwa kwayo kuzodinga ama-ruble angu-14 500) ukuzimisela okusheshayo nokunembile kwezixhumanisi futhi uyakwazi ukuthola isignali ngisho nasemahlathini amahlathi. Imemori enkulu inokwanele ukurekhoda imephu eyisisekelo yomhlaba, imizila engu-50, amamaki angu-1000 nezinto eziningi eziwusizo. Qaphela ukuthi lo mkhiqizo unikeza ukukhethwa okukhulu kwamadivayisi aphathekayo afanelekayo abathandi bokuphila okusebenzayo.
Amathebulethi anezithuthi: ingabe kufanele?
Namuhla, cishe sonke sinamaphilisi afakwe i-GPS-module ehlangene. Yebo, kukhona, ngisho ne-smartphone yesabelomali. Yingakho esikhundleni sedivaysi yokumisa, abantu abaningi bakhetha ithebhulethi ene-GPS- isitimela semoto. Ukutholakala kokusetshenziswa kwayo ukuthi akukwazi ukushiywa emotweni futhi kungakhathazeki ukuthi kuyobiwe. Futhi ngokwemisebenzi, lawo madivayisi angcono kakhulu, ngoba ahlanganisa kokubili i-laptop ne-navigator. Phakathi kwamaphilisi amahle kakhulu angaba yindlela efanelekayo yokuhamba nabagibeli, ungayibona i- Lenovo Yoga Tablet 10 noma i-iPad Air ene-Retina. Yazi ukuthi ngisho namamodeli webhajethi anesimodemu esakhelwe ngaphakathi noma asekela i-GPS-receiver yangaphandle.
Amamodeli amahle kakhulu: isabelomali kanye nendawo ephakathi
Iyini engcono kakhulu ye-GPS-isiphequluli? Omunye ugxilisa ukunakekelwa kumadivaysi ahloniphekile futhi abizayo, kodwa othile uthanda ukusebenza ngokuhambisana nokusebenza kwamamodeli. Cabanga ngamamodeli athandwa kakhulu - izindleko eziphansi kanye ne-premium-class, ukuhlola umehluko phakathi kwabo. Phakathi kwamamodeli esabelomali - okubiza ama-ruble angu-7 000 - sanquma ukunikeza okulandelayo:
I-Garmin Nuvi 2250. Le divayisi ibiza ama-ruble angu-4 400, kanti inezo zonke izinto ezibalulekile ezanele emgwaqeni. Ukuhlukile kwendwendwe ukuthi ihlola isimo sephethiloli, ikuvumela ukuthi usindise futhi ugcine isikhathi esiphezulu. Ngaphandle kokubamba iqhaza komshayeli, idivaysi ilawula umcabango nokubala komzila, ucabange ngisho nokushintshana okuyinkimbinkimbi okungabanjwa emgwaqeni.
I-Prestigio GeoVision 5500 BTFM HD. Ngama-ruble angu-5500 ungathenga isiphequluli esiphakeme futhi esithembekile "Prestigio". Iheha ukunakwa ngomzimba omncane we-ultra-slim, ukuba khona kwe-Bluetooth module edidiyelwe, ukubonisa okuyi-5 intshi nokulinganisa okulinganiselwe. Umsebenzi wamanje unesibopho sejubane lensiza. Isofthiwe yedivaysi i-Navitel.
I-LEXAND ST-7100 HD - enye imodeli ethandwayo. Izindleko zayo zingama-ruble angu-6400. I-RAM yakho ikuvumela ukuba ulande izinhlelo ezidingekayo zokuzulazula futhi uzibuyekeze ngesikhathi esifanele. Phakathi kwezici ezengeziwe kungacatshangwa isidlali somsindo, i-albhamu yesithombe ne-FM-transmitter.
I-Prestigio GeoVision 5056 Navitel izoba umsizi weqiniso kuwo wonke umshayeli ozazisa ukuthi kulula futhi kulula ukusebenzisa. Isofthiwe yekhwalithi, isikrini esingu-5-intshi, ukubukwa kwezinto ezintathu-konke lokhu kuchaza indlela ye-navigator "i-Prestige".
Qaphela ukuthi ngezindleko ezingabizi, umshayeli ngamunye uyajabula ngokuthembeka kokusebenza.
Phakathi kwamamodeli ahloniphekile, okuyinto ngokwesilinganiso esukela kuma-ruble angu-15 000 nangaphezulu, ukunakwa okukhethekile kufanelwe imikhiqizo ye-brand Garmin. Njalo ngonyaka inkampani ikhiqiza intsha, enemisebenzi ephakeme kakhulu. Ngakho-ke, i-model Garmin NUVI 3450 ifakwe isicelo esisha Isiqondiso 3.0, esikuvumela ukuba ngekhanda izindawo ezivakashelwa njalo futhi ubeke imizila kubo. Okunye okugqamile, okugcizelela i-GPS-GPS Garmin, - umsebenzi wokufunda okuphephile kwamathekisthi, uma idivayisi ngokwayo ithi umbhalo obhalwe esibukweni.
Umgibeli wemoto uTomTom Go 730 ungoklasigaba se-premium (izindleko zayo ezijwayelekile ziqala kusukela ku-ruble angu-15 000). Isici saso esikrinini esikhulu, isamukeli se-GPS sesizukulwane esisha kanye nesethi yemisebenzi yanamuhla evumelana nomshayeli.
Ukubamba iqhaza, singasho ukuthi noma yikuphi ukuhamba kwezimoto - isabelomali nokubiza ngokweqile - ngokuyisisekelo, unemisebenzi eyisisekelo edinga umshayeli. Izindleko eziphezulu ngenxa yezici ezengeziwe ezingadingeki njalo. Uma uthanda amadivaysi amaningi, sebenzisa imodeli yemishini ecebile.
"Grammidin" imithi. Yokusetshenziswa
I-Laptop ASUS EeeBook X205TA: ukubuyekezwa, izincazelo, izincazelo kanye nokubuyekezwa
Boning imimese. Ukukhetha, ukubuyekezwa kanye nencazelo
Ukwenza uchungechunge ngomshini
Tuning Gaz-69 - The Legend
Ozokusebenzisa sawo esiningi - kanjani futhi kungani?
Analog "Trental" e ampoules. "Trental": izinkomba ukusetshenziswa, imfundo